Rom Dark Night 5.5 ICS Android 4.0.4 ye Samsung Galaxy S | I-Androidsis
Namhlanje ndiza kunibonisa lo msebenzi uthandwayo wompheki Nasif.
Ngqo ukusuka xdadevelopers, Ndikuphathela le rom ngokusekwe kwi I-firmware ye-Android 4.0.4, yakhiwe kulwakhiwo lwe Iqela Kang, kwaye oko kubandakanya iinketho zoqwalaselo eziqhelekileyo zeerom zeli qela libalaseleyo labaphuhlisi baseTshayina.
Le rom iziva ilulwelo kwaye izinzile kuthi Samsung Galaxy SUmdibaniso wesiseko se Iqela Kang, kunye IKernel uMtyholi 1.1.6b, Benza ukusebenza kwabo kunye nokusebenza kwabo bacofe ubuninzi bezixhobo zethu, ukuba ngowona msebenzi ungoyena uxabisekileyo ngokwexabiso Isandwich yeCream Cream yesiphelo sethu.
Ukuze le rom isebenze ngendlela echanekileyo kwaye ingasiniki iimpazamo njengokuvalwa ngokunyanzelwa kwezicelo, kufuneka ifakwe, ukusuka kwisiseko seFirmware kunye inkqubo yofakelo ecoceke ngokupheleleyo.
2 Ukulungiselela i-Samsung Galaxy S
3 Inkqubo ufakelo Rom
Njengoko besele nditshilo ekuqaleni kweposti, le rom yenziwe ngu Nasif, kwaye ihlanganisiwe ivela kwimisebenzi ye Iqela Kang,(AOKP):
Isiseko se-Android 4.0.4.
Ikhawuleza kakhulu kwaye izinzile i-rom.
Akukho luhlobo lwe-lag.
Ikhamera ekusebenzeni ngokupheleleyo kunye nenkxaso epheleleyo yokurekhodwa kwe-720p. kunye nokusondeza.
IKernel uMtyholi 1.1.6b_BFS_BLN_CMC.
I-Busibox ifakiwe kwaye ihlaziyiwe kuhlobo lwayo lwamva nje.
Ubomi obude bebhetri, kuba uguqulelo lwe-4.0.4 lususa ibug kuhlobo lwangaphambili lwe-Android.
Yongeze iiwijethi kwisakhelo sesaziso.
Isantya esandayo ngokubonakalayo xa uhambisa iifayile nge-usb.
Ukufakela le rom, njengoko bendikuxelele ekuqaleni, Siza kuqala kufakelo olucocekileyo nakwiziseko Isitokhwe seJVU.
Ibhetri yesiphelo sethu kufuneka ihlawuliswe ubuninzi bayo, ukuba akunjalo, ndincoma ukuba ngaphambi kokuqala inkqubo yokufaka ubize yona 100 x 100.
Ngokunjalo, kufuneka ukuba siyisebenzisile ukususa iibhagi kwi-USB, kuba oku kunokusikhulula kukonwaba okuthile kunenye.
Into yokuqala ekufuneka siyenzile khuphela i-rom kwiphepha le-xdadevelopers, sakuba sikhutshiwe siya kuyikopa ngaphandle kokudakumba kwingcambu yememori yangaphakathi yesixhobo sethu kwaye sinokucima ifayile ye- Samsung Galaxy S ukuqhubeka nokuyilayita ikwimo Ukubuyisela.
Amanyathelo ekufuneka elandelwe ukusuka kwifayile ye- ukuchacha Ziya kuba zezi zilandelayo:
Sila idatha / uphinde Uqalele okweshishini.
Susa indawana ebambekayo.
Phambili / susa i-dalvik cache.
Buyela umva, ukubuyela kwiscreen sokuBuyisa kwakhona.
Khetha i-zip kwi-sdcard yangaphakathi, kweli nyathelo siye kwi-zip ye-rom kwaye siqinisekise ukufakwa kwayo.
Ngale nto siya kuba nomsebenzi wokonwabisa Nasif ifakwe ngokufanelekileyo kwifayile yethu ye- Samsung Galaxy S, kunokwenzeka ukuba ekuqaleni ezibengezelayo vele ufake ifayile I-Rom kernel, siyakuyazi le nto, kuba isixhobo sethu siza kuhlala kwindawo eqhubekayo kwisikrini sokuqala, ukuyisombulula kuya kufuneka singene kwakhona kwi-Recovery kwaye faka i-rom ukusuka kwinqanaba lesi-5.
Iinkcukacha ezithe xaxe - I-Samsung Galaxy S, uyifaka njani i-Rom ngendlela ecocekileyo, I-Samsung Galaxy S, hlaziya nge-odin kwi-firmware 2.3.6 kunye neCF Root yayo
Khuphela - Rom emnyama Knight 5.5
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » Samsung » I-Samsung Galaxy S, iRom Dark Knight 5.5
Izimvo ezi-66, shiya ezakho
Ngaba iyahambelana nemodeli ye-i9000b?
Ewe, andazi ukuba mandikuxelele ntoni, khange ndikwazi ukuyiqinisekisa buqu, kodwa kukho abasebenzisi abathi banayo.
Izinzile kwi-GT-i9000T enkosi atte: pipe
UAitor Isaoglu sitsho
Ngaba iyahambelana neSamsumg Galaxy S2?
Phendula kuAitor Isaoglu
Hayi, i-terminal nganye ineeRoms zayo.
Umgca we-Bline hodd sitsho
I-ROM enomdla, kodwa .. ingaba unomathotholo we-FM uyasebenza? Ukusetyenziswa kwebhetri? : p
Phendula uBline Hodd
Irediyo ye-FM ayisebenzi nakweyiphi na i-ICS, kodwa unomoya owenza umsebenzi ofanayo, ngokubhekisele ekusebenziseni ibhetri kuhambelana nokusetyenziswa kwakho, kodwa kujikeleze amanqanaba ayo yonke i-ICS.
I-Omg, akukho ICS? : S imbi kangakanani i-xD. UMoya ndicinga ukuba ukuba awusebenzi ngonomathotholo wangaphakathi uyakusebenzisa i-TDD, akunjalo?
Enkosi ngempendulo kaFrancisco
Umoya usebenzisa indlela efanayo nerediyo ye-FM, kuya kufuneka uhlengahlengise iiparameter ngesandla.
Ewe ihamba kakuhle kwaye ijongeka intle kakhulu kodwa ndineengxaki ezimbalwa ... Kwelinye icala, ugqithiso lwedatha lwenziwe lwasebenza emva kwethutyana (ngamanye amaxesha imizuzu eli-15, ngamanye amaxesha iyure njengoko inika njalo) kwaye kwelinye icala andinakukwazi ukubeka iringithoni akukho ngoma mp3 ingoma. Enkosi
Yonke into ekufuneka uyiqwalasele kulawulo lwe-rom
Sele ndizisombulule iingoma ze-mp3, kuye kwafuneka nditshintshe indawo ekuyo ukuya kwifolda «Rigntones» kwaye kunjalo. Into yokugcwala kwedatha ilungisiwe kum, kubonakala ngathi…. Masibe nethemba lokuba iyaqhubeka isebenza kwaye ayisebenzi kwakhona. Kodwa ngoku ndineengxaki ezintsha:
-Iyandixelela ukuba ndinendawo encinci yediski xa ingeyonyani, ndinamagumbi angaphezu kwama-3 asimahla esithuba kodwa ayindivumeli ukuba ndifake ezinye izicelo kwaye ndifumana isaziso esisigxina kwibhar yesaziso esithi akukho phantse isithuba esishiyekileyo ……. Ndikhangele iiforamu ezininzi kwaye andifumani sisombululo kuba ezinye zithetha ngokwahlula-hlula ikhadi okanye izinto ezinje kwaye abanye bathi nge-ICS awunakho ukwahlula nantoni na ... ndilahlekile kancinci.
-Ndinayo nengxaki yokuba isalathi sebhetri asimakiswanga kakuhle, sisuka kwi-100% iye kwi-85% iye kwi-50% iye kuma-43% kwaye kungakhange kuboniswe amanani aphakathi ... Ndiyazi ukuba le yokugqibela ayibi kakhulu kodwa mna ndicaphukile ndingazi ukuba lingakanani ibhetri elishiyekileyo….
Andinakho uqhagamshelo lwe-intanethi ngaphandle kwe-wifi. Ndibeke idatha yenziwe yasebenza kwaye ndibona iisetingi ze-apn kwaye zilungile andazi ukuba kutheni.Naluphi na uluvo?
Ngaphakathi kwee-APN kufuneka usebenze uqhagamshelo ngokujonga ibhokisi ejikelezayo ecaleni kwenkcazo.
Ndineengxaki ezifanayo ne-Djoscarbass, ndiyenzile into oyithethayo kwaye akukho nto ... andazi ukuba ndinophawu lwe3G nokuba- ICS ayenzi vidiyo?
Kuya kufuneka utshintshe imodem, leyo iza ngokungagqibekanga kwirom isenokungasebenzi kwindawo yakho.
Ndingayifaka imodem yejvo eza neGingerbread? Ngaba unayo nayiphi na into endinokuyikhuphela kwaye ndiyizame? NdiseUruguay
Ndinengxaki efanayo neyakho, ingaba usibonile isisombululo?
Molo, ndingathanda ukwazi ukuba le rom ingafakwa kwi-Samsung Galaxy S Plus?
Hayi, itheminali nganye inesakhiwo sayo kunye nezixhobo ezahlukeneyo.
Ngaba ukhona umntu owaziyo ukuba kunokwenzeka ukuba kudanyaze enye imodem kule ROM?
Imodem engagqibekanga yale ROM ayisebenzi kum njengaleyo bendinayo kwiGingerbread (JVO Modem). Ndicinga ukuba kungenxa yendawo (uhlobo ngalunye lweemodem lusebenza ngcono kwiindawo ezithile). Phambi kokuba ndikunye no-Darky Rom 2.3.6 Isonka sejinja kwaye kunokwenzeka ukuba kukhanyiswe iimodem, kodwa ndizamile ngale nto kwi-CWM kwaye indinika impazamo.
Umntu othile unento ayaziyo ngayo? Enkosi
Ukuba kunokwenzeka, kwisithuba esilandelayo ndiza kukuzisa iimodem ze-Galay Nexus kwaye ndiza kuchaza inkqubo yokufaka.
inokufakwa kwi-samsung galaxy s ephilayo. ???????
Ukuba yimodeli ye-GT-I9000, ewe.
UJose Ricardo Barrera Vazquez sitsho
Kufakwe kwi-SGS Vibrant GT-959 T-Mobile
Kwaye usebenza ngokugqibeleleyo ...
Ngendlela ... Kuya kufuneka ukhumbuze abasebenzisi ukuba benze imeko yokusula yebhetri emva kofakelo ngalunye ...
Phendula kuJose Ricardo Barrera Vazquez
molo, mhle kakhulu kwaye uyatyibilika.
kodwa ... nditsibela lonke ixesha, inkqubo ye-android.process.media imile, ivala ikhamera, igalari, andikwazi ukubeka naziphi na iingoma okanye izaziso kwaye iyawuvala umdlalo.Ngaphandle koko, i-gmail ayiwenzi sebenza.
Ukuba unazo naziphi na izimvo zokuyilungisa, kuba ndiyithanda kakhulu i-rom.
Kungenxa yokuba awenzanga ufakelo olucocekileyo, liphinde ulilayite ngokulandela amanyathelo kwesi sifundo:
Sele ndiyilungisile nge-titanium, ngoku i-gmail.ideas ayisebenzi ??
Ngenisa usetyenziso kwaye wenze idatha ecacileyo, cacisa i-cache kwaye unyanzele ukuvala, emva koko qala i-terminal.
Kukho into engacacanga kum
Ndine-sgs, Android version 2.3.3
Kuya kufuneka wenze uhlobo oluthile lokwehlisa ngaphambi kokufaka olu hlobo lwe-Android okanye ungayenza ngokuthe ngqo
Ngqo ungayenza ngokugqibeleleyo.
Ndiyivuselele kuphela kwii-kies kwaye bekungacaci kum ukuba ufakelo olucocekileyo
Molweni zihlobo, ndinenkxalabo encinci malunga neli gumbi. Ndiyitshintshe iRom ukuya kwisamsung galaxy s ye-knight emnyama 5.5 kunye ne-4.0.4 kodwa indinika iingxaki ezininzi, iscreen siyabanda xa ndifuna ukuvula inkqubo. (ayililo lonke ixesha), ngamanye amaxesha iyaziqala kwakhona, ixesha elininzi indixelela ukuba inkqubo ayiphenduli ukuba ndifuna ukuyivala, xa umnxeba ungena uyabanda kwaye awundivumeli ndiphendule (ngamanye amaxesha ngamanye amaxesha ), kwaye hayi ndiyazi ukuba ndenzeni. Ukuba umntu unokucela undinike intambo, ndingayixabisa kakhulu. Ndinenguqulo 2.3.6 egxothiweyo
Yenza izinto ezintathu zokucima kwaye ufake kwakhona iROM ...
Abahlobo kuba i-SGS i900 yam ayibonakali:
Phambili / susa i-dalvik cache. naziphi na izimvo?
Olu khetho luphakathi koBuyiselo oluhlengahlengisiweyo, kwaye luza kuko konke ukubuyisela kwakhona.
Ngaba unayo i-ClockWork MOD ???
I-Yader Bassil Kanahuati Trundle sitsho
Molweni nonke, ndine-Galaxy S i9000T kwaye ndifuna ukufaka le rom kodwa andiqondi ukuba kufuneka ndibenenye into efakiweyo, sele ndiyingcambu kodwa andikenzi lukhulu kwifowuni, inenguqulo 2.3.3 ukuba ndiyifake ngeKies de Apho akukho nto ndiyenzileyo, eyokuba siza kuqala kufakelo olucocekileyo kunye nesiseko seStock JVU. Andinayo loo nto, mhlawumbi banevidiyo yokundinceda, enkosi kakhulu kwangaphambili
Phendula i-Yader Bassil Kanahuati Trundle
Kuya kufuneka ufake i-Recovery eguqulweyo, eyaziwa ngokuba yiClockworkMod Recovery.
Ungandinika ividiyo okanye into endikhokelayo ukuba ndiyenze kwi-Galaxy S yam, akukho ngxaki ngokupheliswa kwam yi-i9000T? Enkosi
Isifundo esisibonisa apha ngezantsi, indlela yokuhlaziya i-Galaxy S nge-Odin ukuya kwi-firmware 2.3.6 kunye ne-Root yayo, iya kusebenza, phakathi kwezinye izinto, ukufaka i-ClockWorkmod Recovery kwi-GT-I9000 yethu, ukuze kamva ikwazi ukufaka nayiphi na iguqulwe iRom kwaye yenzelwe isiphelo sethu.
Into yokuqala ekufuneka siyijongile kukuba i-Galaxy S yethu iyakwazi ukufikelela kwiMowudi yokukhuphela, ngenxa yesi sizathu kwaye siyicime ngokupheleleyo siyakuyivula ngokudibanisa amaqhosha alandelayo, Vol minus + iqhosha lasekhaya + Inkinobho yamandla, siya kuwacinezela ngaxeshanye kwaye ngaphandle kokuzikhulula de kube ngathi kuvela isikrini:
Fikelela kwimowudi yokukhuphela
Ukuba kunjalo, siya kukulungela ukufaka i-firmware ye-JVU nge-Android 2.3.6 sisebenzisa isixhobo esiya kuba sisisiseko kwaye sibalulekile kwi-Android yethu, esi sixhobo asiyiyo enye ngaphandle kwe-Odin yeWindows.
Ukuphuma kwimowudi yokukhuphela, konke okufuneka ukwenze kukubamba iqhosha lamandla kangangemizuzwana elishumi, okanye, ukusilela oko, susa ibhetri kangangemizuzwana emihlanu kwaye uyibuyisele ngaphakathi.
Gcina ukhumbula ukuba ngokulandela amanyathelo kwesi sifundo, kuya kufuneka uthathe lonke uxanduva lwento enokwenzeka kwisixhobo sakho, ukuba uyahambelana nemiyalelo apha, akukho nto imbi kufuneka yenzeke, kodwa cinga ukuba ngalo lonke ixesha singena ngaphakathi kwinkqubo yethu Galaxy kukho umngcipheko ukuba asizenzi izinto njengoko kuyalelwe.
Kwangokunjalo, ngaphambi kokuqala esi sifundo, kuya kufuneka ibhetri yesiphelo sakho ihlawuliswe i-100%.
Kuya kufuneka bonke abaqhubi bafakwe ngokuchanekileyo kwi-PC yethu, ukuba uneeKies ezifakiweyo kwaye ungqamene ngempumelelo nesiphelo sakho nangasiphi na isihlandlo, uya kuba sele uneemoto eziyimfuneko ezifakiweyo, ukuba akunjalo, yiya kwiwebhusayithi esemthethweni yakwaSamsung kwaye ukhuphele okutsha ingxelo esemthethweni yale nkqubo kwaye uyifake kwaye ungqamanise isixhobo sakho.
Inkqubo esemthethweni ye-Kies
Into yokuqala esiza kuyenza sakube siqinisekisile ukuba siyakwazi ukufikelela kwimowudi yokukhuphela, iya kuba kukukhuphela zonke iifayile eziyimfuneko ukuze siphumeze esi sifundo ngempumelelo, kuba oku kuncamathisela amakhonkco kuzo zombini inkqubo zeOdin yeWindows kunye negosa I-JVU Firmware kunye neCF Root yayo ehambelana nayo.
Nantsi ikhonkco kwifayile ebalulekileyo ebizwa ngokuba yiPit 512, ebalulekileyo ukuze ukhanyise i-Galaxy yethu usebenzisa i-Odin, ihlala iza ngaphakathi kwiFirmware okanye kwi-CF Root tablet, kodwa ngamanye amaxesha ndiye ndafumana isimanga esibi sokuba le fayile ibilahlekile Ndincamathisela nganye nganye ukuze ukwazi ukuyigcina ikhuselekile.
Nje ukuba zonke iifayile zikhutshelwe, siya kuthi sizivule zonke kwindawo kwiPC yethu esizithanda kakhulu, ndikucebisa ukuba wenze ifolda entsha kwidesktop kwaye uziphu zonke ngaphakathi kuyo, zonke ngaphandle kwefayile yokugqibela, ukusukela ayicinezelwa.
Ngoku kweli nyathelo siza kuya kwimenyu yeGlass S yethu kwaye senze i-usb debugging, ebekwe kule ndlela ilandelayo: Imenyu / Useto / Izicelo / uPhuhliso.
Nje ukuba konke oku kwenziwe, siya kuba nakho ukuhlaziya i-Galaxy S yethu ukuya kuhlobo lwe-2.3.6 nge-Odin kwaye sifake i-CF Root ehambelana nayo.
Indlela yokufaka iFirmware
Okokuqala siza kujonga ukuba iiKies zivaliwe ngokupheleleyo, kuba oku siza kuvula umphathi weWindows kwaye siphelise nayiphi na inkqubo enento yokwenza neKies, ngokujonga nje amagama azo zonke iinkqubo ezivulekileyo, ukuba kukho nelinye elibandakanya igama elithi Kies kwenye indawo ingavala nayo.
Ngoku siza kwenza inkqubo yeOdin kwaye siya kuboniswa iwindow enje:
Isikrini sasekhaya seOdin
Emva koko siza kubeka iifayile kwifolda yeFirmware ngolu hlobo lulandelayo:
Siza kubeka ifayile yePit esiyikhuphela okokugqibela kwiqhosha elifanayo, kuba oku siza kucofa kwi-PIT kwaye sizulazule kwindlela esasikade siyigcina kuyo ngaphambili.
Kwiqhosha le-PDA siza kubeka ifayile yeKhowudi ye-firmware engafakwanga
Kwiqhosha leFowuni siza kubeka ifayile yeMODEM
Kwiqhosha le-CSC siya kukhetha ifayile ebizwa ngokuba yi-CSC
Siza kujonga ukuba iibhokisi zoluhlu lokutshekisha ngasekhohlo ziphawulwe ngoKwahlula-hlula kwakhona, ukuQala kwakhona ngokuZenzekelayo kunye no-F.Cwangcisa ixesha lokukhetha.
Ukufumana ukhuseleko ngakumbi jonga umfanekiso oqhotyoshelwe apha ngezantsi:
Yile ndlela iOdin ekufuneka ijonge ngayo kuwe
Nje ukuba yonke into iqinisekisiwe, siya kuyicima ngokupheleleyo i-Galaxy, kwaye siyakuyivula ngokudibanisa amaqhosha akhankanywe apha ngasentla kwimowudi yokukhuphela, siya kuyidibanisa nePC kwaye siza kujonga kwi-Odin screen ukuba uyamkele ngokuchanekileyo, kuba oku kuyakusibonisa igama elithi COM elilandelelweyo lenani elikwicala elingasentla ngasekhohlo.
Ngoku kuyakufuneka sicinezele iqhosha lokuQala kwaye ungachukumisi nantoni na de iphele le nkqubo kwaye kwinxalenye ephezulu yasekhohlo inika ingxelo ngegama lokudlula, ngaphandle kokuthetha ukuba akufuneki, ngexesha lenkqubo unqamle ifowuni phantsi kwazo naziphi na iimeko, kunye nokuthintela ikhompyuter yethu ukuba ingalali, i-hibernation okanye nantoni na enjalo.
Inkqubo inokuthatha malunga nemizuzu emihlanu. Kude kube sibona igama elithi PASS lingachukumisi nto, nje ukuba sinikwe iPasi sinokucima ifowuni kwikhompyuter kwaye siyilinde ukuba iqale kwakhona.
Indlela yokufaka i-CF Root
Ngenyathelo elidlulileyo uya kuba nayo i-Galaxy ehlaziyiweyo ngokuchanekileyo kwaye isebenze ngokupheleleyo kuhlobo lwe-Android 2.3.6, kweli nyathelo lilandelayo, siya kuyinikela ngesixhobo esinye ukufaka iKernel yesiko kunye neNgcambu kunye neClockWorkmod Recovery efakiweyo.
Emva kwale nkqubo siza kuba neGalaxy ekulungele ukufaka nayiphi na iRom ehambelanayo ngokubuyiselwa kwakhona.
Siza kuvula i-Odin kwakhona, ukuba besele siyivulile ngaphambili, besiza kuyivala size siyivule kwakhona, ngeli xesha siza kuyibeka ifayile ngaphakathi kwifolda yeCF Root, kwicandelo le-PDA le-Odin, kwaye asizukukhetha iifayile ezingaphezulu.
Siza kuqinisekisa ukuba Ukwahlula-hlula akuphawulwanga ngeli xesha, ezinye iindlela ezimbini kufuneka zikhethwe, ukuze kungathandabuzeki ukuba ndibamba ukubanjwa kwento yonke ekufuneka ijongeke ngayo ngeli xesha:
Nje ukuba siqinisekise ukuba yonke into injengasemfanekisweni oqhotyoshelweyo, siya kuyicima i-Galaxy kwaye siyivule kwakhona kwimowudi yokukhuphela, yakuba ivuliwe siya kuyidibanisa ne-PC kwaye siza kunika ithuba lokuqala le-Odin iwindow.
Ngeli xesha inkqubo iya kuthatha ixesha elingaphantsi komzuzu, kwakamsinya nje ukuba u-Odin abuyise igama elithi Pass, sinokukhupha ifowuni yethu kwikhompyuter kwaye siyilinde ukuba iqale kwakhona.
Ngale nto siza kuba neRoteado, ukubuyiswa kuguqulwe kwaye kwahlaziywa kwinguqulelo 2.3.6 ye-Android.
Hlala ubukele iimpapasho ezintsha njengoko ndizakubonisa ezona Roms zibalaseleyo kwisixhobo sethu, zombini iGingerbread kunye neyona Ice Cream Sandwich yakutshanje ene-Android 4.0.
Olunye ulwazi -I-Samsung ayizukuyihlaziya i-Galaxy S yayo nayiphi na ipakethi yexabiso
Khuphela-iiKies, Odin, iFirmware, iCFRoot, iPit 512.
Le rom ayisiyisixhobo sakho, yeyama-I9000
Ndincede mfana, ndiyifakile iROM yeyam ye-Samsung galaxy S Vibrant… iyi-5.0.5 kwaye ndicofa iqhosha levolumu + kunye-kunye neqhosha lokuvala kwaye ndifumana isikrini esiluhlaza. Xa ndifika ku-Faka isicelo sohlaziyo kwinyathelo leKhadi le-SD ndifumana umyalezo othi E: Ukuqinisekiswa kwesiginesha akuphumelelanga. INTO ENDIYENZAYO?
Uxolo kodwa ndinengxaki, ndiyenzile yonke into enegama kwisifundo, akukho ngxaki ibonakalayo kodwa ndicima iifayile kwigalari zize zinyamalale, ndicime isiphelo sendlela, ndiyayilayita kwaye iifayile zikhona kwakhona, wenze into engalunganga?
ICrixuz gore sitsho
Molo, bendiyenza njani into yokuguqula iseli ukongeza kuphela amanyathelo okuqala akhankanyiweyo kwesi sifundo, kodwa ingxaki yam kukuba ifowuni iyakhuphela kwaye inebha encinci eluhlaza engakhange ihambe iyure. Ndiye ndavala i-odin ndaza ndaphinda ndaqala ikhompyuter kunye ne-kite ibhetri kwi-gt i9000t endinayo kodwa ngoku ayisandivumeli ukuba ndingene kwimowudi yokubuyisela kwimeko yesiqhelo kwaye xa ndiyidibanisa kwakhona kwi-odin kwaye ndenza amanyathelo kuphela kumyalelo sbl.bin kwaye ukusuka apho akukho nto iqhubela phambili. Sele ndizamile ukuyidibanisa nee-kies kwaye nayo khange indamkele, umntu angazi ukuba ndingayilungisa njani. Inqaku elibalulekileyo ndilandele onke amanyathelo kwileta kwaye nangona kunjalo ndiphumelele uu
Phendula Crixuz Gore
Le ye-Galaxy S, imodeli yeGT-I9000
Nge-23 kaNovemba ngo-2012 ngo-03: 51 kusasa, uDisqus wabhala:
UJuan Manuel Contreras sitsho
Ukuba kunokwenzeka, okoko nje ungangena kwimowudi yokukhuphela ifowuni, ndine-galaxy s i900T kwaye nangona bendinengxaki okoko ndinayo le fayile ye-sbl.bin ivinjiwe kwaye ifowuni ndayinikwa kwimizuzu engaphantsi kwe-10 mna Ndifumene isisombululo kwaye ndafaka le nguqulo esebenza ngokuchanekileyo kwaye ngaphandle kwengxaki.
Phendula u-juan manuel Contreras
UMenon Ayala sitsho
Usombulule njani umhlobo wezitena? Ndibambekile apho, andidlulisi ifayile ye-sbl.bin, ndixelele endinokukwenza!
Phendula uMones Ayala
Ndicinga ukuba uye wakwazi ukusombulula ingxaki, akunjalo?
usebenzela i9000T ??
Imeyile eyijunk sitsho
INkosi ye4ndroid. Inguqulelo ye-4.1 yeyona shiti inkulu ukhe wayicwangcisa. Ukuhlaziya iselfowuni yam kule nguqulo yeyona nto imbi kakhulu endiye ndakwazi ukuyenza. Kuya kufuneka bazise utshintsho oluza kwenziwa sisixhobo ngaphambi kokulufaka, kuba ukuba bebazi, ngekhe babenalo. Idatha ilahlekile, iinkqubo ezahlukeneyo kunye nemisebenzi ayisebenzi, kwaye iyacothisa rhoqo. Ngaphambi kokuhlaziya into, kufuneka bacinge malunga nokuba icace gca na kunaleyo sele ikho, kwaye indawo yokuqala kukunika umsebenzisi ubuncinci oko sele benako.
Akusekho luhlobo lusemthethweni lwezixhobo ezithile ...
IiRom zeefowuni ezithile zibuko lolunye uguqulelo ...
Yiyo loo nto iimpazamo ...
Fcocastillo R sitsho
Ndilufaka njani ulungiso? Enkosi.
Phendula kwiFcocastillo R
Abahlobo kule rom ndingayifaka njani i-WIFI AP kunye nerediyo, zizinto endizisebenzisayo, kwaye xa ndihlaziya le nguqulo abayisebenzeli mna
Khangela inguqulelo entsha, ukuba i-rom sele iphelelwe lixesha.
Nangona kunjalo, into kanomathotholo iya kuhlala ikukugcina kuba akukho hlobo lwayo lusemthethweni okanye i-ICS okanye i-JB
molo kulungile ndiyifakile le nguqulo kwiselfowuni yam kodwa indixelela lonke ixesha inkqubo yemidiya ye-Android iyekile ndingayisombulula njani? Enkosi
UNestor Adrian Luna sitsho
kuba s Sung S kwangaphambili le rom iluncedo
Phendula kuNestor Adrian Luna
Molo, bendiyenza njani into yokuguqula iseli ukongeza kuphela amanyathelo okuqala akhankanyiweyo kwesi sifundo, kodwa ingxaki yam kukuba ifowuni iyakhuphela kwaye inebha encinci eluhlaza engakhange ihambe iyure. Ndiye ndavala i-odin ndaza ndaphinda ndaqala ikhompyuter kunye ne-kite ibhetri kwi-gt i9000t endinayo kodwa ngoku ayisandivumeli ukuba ndingene kwimowudi yokubuyisela kwakhona kwaye xa ndiyidibanisa kwakhona kwi-odin kwaye ndenza amanyathelo yi-keda kuphela myalelo sbl.bin kwaye ukusuka apho akukho nto iqhubela phambili. Sele ndizamile ukuyidibanisa nee-kies kwaye nayo khange indamkele, umntu angazi ukuba ndingayilungisa njani. Inqaku elibalulekileyo, ndalandela onke amanyathelo kwileta kwaye ke ndisilele uu
Molo, yonke into efakiweyo ngaphandle kwengxaki okwangoku, ngaphandle kwemicimbi ethile ye-
uthungelwano olunqamlayo kwaye lundibuze ukuba ndenze idatha isebenze ekuzuleni
ukusebenzisa ipakethi yedatha, kodwa yenzekile kum ngamanye amaxesha kwaye iphelile
ukusombulula. Tuto elungileyo
Kodwa, umbuzo omnye, ndilufaka njani ulungiso? Kwiphepha apho yayikhona iROM, bathi ukufaka ukulungiswa, banika le miyalelo:
Faka i-rom ephambili kuqala uye kulawulo lwe-Rom / kwi-Start-up Tweaks. Vumela imvume yomsebenzisi ophezulu. Emva koko fakela oku kulungiswa.
kodwa ngaphaya kokuvumela ukufikelela kwengcambu andifumani
Enye into encinci, ndicinga ukuba ukusilela kwenethiwekhi kungenxa yemodem, ndingazi
umntu ovela kwimodem ehambelana nale ROM okanye into yokusombulula
ingxaki? Ndivela eSpain, enkosi
Ndiyifumana njani kwakhona i-3g ngolu hlaziyo?
Le rom iphelelwe lixesha, jonga enye yangoku, kwi Androidsis unezinto ezininzi umzekelo ezisebenza kakuhle yiRC2 evela elitemovil.
Ndikwinkqubo kwaye indixelela kumyalezo E: ukuqinisekiswa kwesiginesha akuphumelelanga. INTO ENDIYENZAYO? Kukho umntu ondincedayo. Imeyile yam: alenniz_alvarado327@yahoo.com
Molo, emva kokusula i-siragon 4n tablet ndifumana impazamo ethi "isicelo sokwenza ngokwezifiso simile" kwaye ayiqali, ungandinceda ???
Isamsung s yam kunye no. Yeka ukulawula kwaye. Ayisebenzi ukuba ndiyikhuphele kanjani